Momba anay - Jiangxi ETEX Industry Co., Ltd.
WUXI EV Window Decoration Co., ltd. Ao Wuxi, Shina, izay tanàna mandroso be ara-toekarena sy fizahan-tany, dia adiny iray miala ny Shanghai no misy tombony lehibe eo amin'ny rojotra indostrialy sy fitaterana. Ny EV dia natsangana ho toy ny orinasa mpamokatra sy fanondranana entana efa hatramin'ny taona 2012. Miara-miasa amin'ny mpiasa 120 sy voly miasa tsara 18000m2.
Orinasa EV miaraka amin'ny marika "ETEX" izay nanome ny marika Blinds lamba vita amin'ny lamba sy aingam-panahy avo lenta.
Misy andalana coating telo, milina fanenona efa-polo ary karazana milina famolavolana vaovao ho an'ny fanamboarana jamba. Ny ifantohan'ny ETEX amin'ny famoronana karazana lamba jamba vita amin'ny jiro sy ny jamba efa vonona. Toy ny: lamba vita amin'ny Roller Blind, lamba volon'ôkiazy, lamba amin'ny sunscreen, Jacquard, plain, blackout, translucent, coating volafotsy, voajanahary ary Zebra Blinds. Noho ny kalitaonay sy ny vidiny tsara sy ny fifaninanana, ny vokatra ETEX dia navarina tamina firenena 50 mahery sy faritra miaraka amin'ny laza volamena ary haingana ny fampandrosoana.
Miaraka amin'ny teny filamatra momba ny: kalitao aloha, ny vidiny mirary, famolavolana zava-baovao ary serivisy am-pahatsorana! Ny "ETEX" dia hatokana ho mpamatsy vahaolana feno ho an'ny tontolo fiarovana ny tontolo iainana sy ny Fashions Window.
Miarahaba anao, nankasitraka ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba handray anjara amin'ny fiaraha-miasa maharitra sy orinasa mahomby miaraka amin'ny ETEX.